पत्रपत्रिका बाट « रिपोर्टर्स नेपाल
तीन महिना पहिले आयोजना सम्पन्न गरे एक अर्ब पुरस्कार !
काठमाडौं २३ जेठ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले तोकिएको समयभन्दा तीन महिना पहिले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरे एक अर्ब बराबरको पुरस्कार दिने घोषणा गरेका
पारससहित अन्य खेलाडीलाई शसस्त्रले हटायो
काठमाडौं २२ जेठ । तलब दिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले ५० खेलाडी तथा प्रशिक्षकको करार सम्झौता रद्द गरेको छ । खेलकुद कोष रित्तिएपछि वैशाखदेखि नै सशस्त्र प्रहरीले सबै करार खेलाडी र
राजपामा चर्को विवाद
काठमाडौं २२ जेठ । नेतृत्वबीच आन्तरिक विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री चुनाव र दल दर्ताबारे राष्ट्रिय जनता पार्टी आइतबार कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री चुनावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालदाई समर्थन गर्ने राजपाको
उपत्यकामा बर्षकै सबैभन्दा गर्मी
काठमाडौं २२ जेठ । आइतबार काठमाडौंमा यस बर्षकै सबैभन्दा बढी गर्मी महसुस गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । उपत्यकाको शनिबारको तापक्रम २९ डिग्री सेल्सियस रहेकोमा आइतबारको तापक्रम
सरकारी नम्बर व्यक्तिका नाममा
काठमाडौं २२ जेठ । सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् ।आजको गोरखापत्रमा खबर छ । विश्वास नलाग्न सक्ला तर राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागका फोन नम्बर अरू
कहाँ हराए पराजुली विरुद्ध रिट दायर गर्ने वकिल ?
काठमाडौं २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै रिट दायर गर्ने अधिवक्ता विकास गिरी चार दिनदेखि सर्वोच्चको सम्पर्कबाहिर रहेका छन् । गिरीले गत बुधबार न्यायाधीश
देउवालाई राजपा, फोरम र राप्रपाको समर्थन
काठमाडौं २२ जेठ । आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भएका छन्
यो देशमा राम्रो काम गरेको कसैले नसहँदो रहेछ – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
काठमाडौं २२ जेठ ।प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो देशमा राम्रो काम गरेको कसैले नसहँदो रहेछ भन्नुभयो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड भ्रमणका क्रममा आइतबार कार्कीले दिपायल
भरतपुरका दुई अध्यक्षलाई सपथ नगराउन आदेश
काठमाडौं २२ जेठ ।भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ र ७ का वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको हैसियतमा सपथ ग्रहण नगराउन र सो हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न÷नगराउन आज उच्च अदालत पाटन, हेटाँैडाले विपक्षीका
२५ वर्षीया नेपाली युवतीको दुबईमा हत्या
काठमाडौं २२ जेठ । यूएईको दुबईमा भोताङ– ८ सिन्धुपाल्चोककी २५ वर्षीया लप्साङ तामाङको मे २० मा हत्या भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । अबदाबीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता कृष्ण अर्यालका अनुसार
चुडामणि शर्माको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन
काठमाडौं २२ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । विशेष अदालतले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै
निर्वाचन आयोगले राजपालाई दियो यस्तो आश्वासन
काठमाडौं २२ जेठ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई सरकारसँग सहमति भएको पत्र पाउनासाथ चुनाव चिह्न प्रदान गर्न प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएको छ ।राजपा शीर्ष नेतृत्वसँग आइतबार